Ngokuqhelekileyo siva malunga nabanye abantu ukuba uyabuthathaka, unomdla. Ngengqiqo yethu, eli binzana, kunye negama elithi "charisma" ngokwayo, lidibaniswa nempumelelo, amandla, amandla, ubunkokheli, ukukhanga, ukukhangela okungenamkhawulo. Nabani na ofuna ukuva iinkcazo ezinjalo kwidilesi yakhe, kodwa, hayi, bambalwa kuphela abanokuthi bathethe ngokuzithemba ngabo - "Ndiyindoda."
Ngoko yintoni intswelo: impahla efumanekayo okanye efunyenwe ngumntu.
Ngoku kukho iingcaciso malunga neengama-60 zegama elithi "charisma", kodwa akukho ncazelo ecacileyo yale nzekayo. Ngolwimi lwesiRashiya, amagama asondeleyo afana nomxholo othi "intlungu" iya kuba "inqabileyo", "ukukhanga", "imisebe." Leli gama lafika kuthiwa evela kwiGrisi lasendulo, apho "intlungu" isetyenziselwa "isipho", kamva, amaKristu okuqala afaka kuyo intsingiselo 'yesipho sikaThixo.'
Abantu abahlaselayo bahlala beenkokeli, bekhokelela abantu abaninzi, bethande kubo, njengomlilo weebhu - kodwa kutheni le nto yenzeka? Umntu onobukrakra ulawula njani ukuba anqobe isihlwele? Ziziphi iimeko ezifihliweyo abanalo? Kwaye nawuphi na umntu onomthombo onamandla ngokwenene wobuntu kunye nobuntu?
Iingcali zengqondo zithi akuyena wonke umntu unesihlwele esinjalo ukukhohlisa inani elikhulu labamkeli kunye nabalandeli. Kukho okubizwa ngokuba yi-butterfly-ephemera, abantu abaye baphumelela ngempumelelo kanye, bebekutshatyalaliswa kokuthandwa kunye nokuqatshelwa, kodwa emva kwexesha abazange banamathele nge-aura ye-charisma, kwaye bonke balahlekile. Kunzima kakhulu ukugcina isikhundla senkokheli kunye nomntu onamandla ixesha elide.
Ukuba sibheka iinkcukacha zembali, ngoko siyakwazi ukuyila isangqa seempawu ezidibanisa umntu ukuba abe nexhala.
Umntu onobubele akasithandi ukufihla iziphoso zakhe: abantu abanamandla ngokwenene banamandla emoyeni, kwaye abo abangenamahloni ngokulimala kwabo banamandla kwaye banandipha ukuthandwa kakhulu. Umzekelo wabo wobomi ugqugquzela abanye, ukunyanzelisa kwabo. Ngokomzekelo, u-Oliver Cromwell, owawisela umculi ukuba apeyinise i-portrait yakhe ngaphandle kwe-embellishment, eyona zonke izilonda kunye neengxabano. Kodwa nanko kukho okungafaniyo - uFranklin Roosevelt wenqabela abathwebuli beefoto ukuba bajike ngesihlalo sabakhubazekile.
Umkhokeli onobukrakra kufuneka abe ngumphathi weempawu azisoloko eyaziwayo kwaye ekhangele apho abantu bakhumbula khona kanye lo mntu. Kukho imizekelo emininzi kwimbali: i-cigar kaChurchill, ipayipi likaStalin, ikhefu likaLuzhkov kunye nokunye okuninzi. Ngaphantsi kwemiqondiso unokuqonda zonke izinto ezincinci ezenza umfanekiso walo okanye lo mntu: indlela, indlela yokuthetha, indlela yokugqoka, nekhanda-konke oku kufanele kukukhunjulwe kwaye kugxininise, ukuphakamisa, umntu ngaphezu kwesihlwele.
Umkhokeli onobungqina kufuneka ahlale elwa neentshaba zakhe. Inkokeli enamandla, ngokukhusela ngokuphindaphindiweyo umhlambi wakhe kubantu abafuna ukuguqula izinto, ngokuzikhethela kukhuthaza ukuhlonipha kunye nokwesaba okulula. Kodwa apha kufuneka kukhonjiswe ukuba inkokeli enokuzikhethela ayiyi kukhangela inzondelelo kunye neenjongo zakhe - umkhonzi wabantu makabe ngabantu.
Umkhokeli onobukrakra kufuneka amangaliswe, kufuneka akhuphe enye entsha kwaye afune izinto ezintsha kuyo yonke into. Intsingiselo yeembono kunye neembono zikhangisa abantu bakholelwa ukuba kuphela ukuqhubela phambili kunokuphumelela impumelelo, kwaye awwamkeli izityalo. Isalathiso akumele sikhohliwe. Nangona sikhohliwe ngezopolitiko kwaye sibuyela kwihlabathi eliqhelekileyo-indoda enokuba neentengiso kwi-nkampani, indlela enhle, eqaqambileyo kwaye ekhangayo, kodwa engabonanga mntu ngaphandle kwembalwa yabantu, iya kufunyanwa ngeengalo ezivulekileyo, iya kubonakala kule nkampani ngokukhawuleza. Uya kuba ngaphezu kwesihlwele, sele ekhangele ingqwalasela, kwaye into ephambili ayiyikuyilahleka.
Ngoku siqonda ukuba i-charisma ayiyinto engafanelekanga, engaqondakaliyo, engaqondakaliyo, ifumaneka kuphela kubantu abakhethiweyo, kodwa kunye nomgca ocacileyo, ocinga ngokuziphatha ngokubhekiselele kumntu oqhelekileyo. Ukufunyanwa kwintlungu yindlela elude kwaye inzima, kodwa kunokwenzeka kwaye yinyani kubo bonke abantu.
Ukudandatheka komtshato emva kokutshata, njani ukuwuphepha?
Indlela yokuchonga uhlobo lomntu?
Indlela yokuyeka ukujijiza
Indlela yokudibanisa kunye nentombi yakho ethandekayo
Amazinyo ezimhlophe ekhaya
Indlela yokulwa neengxaki zeminyaka esixhenxe
Umda wobudala phakathi kwabantwana ukususela kwiminyaka emibili ukuya kweyine
Indlela yokuzilungelelanisa nendlela yokuphila enhle?
I-Salmon ene-avocado sauce
Ziziphi izithethe zomtshato?